Kurwisa kutengeswa kwevanhu munguva yehosha
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kodzero Dzevanhu » Kurwisa kutengeswa kwevanhu munguva yehosha
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Kodzero Dzevanhu • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • Zvakavanzika Zvokufamba • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kuchengetedzwa kwekushanya kwagara kuri pamusoro pekudzivirira vashanyi kubva kwavari, kubva kune vamwe vashanyi, uye kubva kune veko vanotsvaga kuvabira kana kuvabira, kuvabira, kana neimwe nzira kana kurova mushanyi.
Kune vanhu vanofamba nechinangwa chega chekuita zviito zvisiri pamutemo pabonde.
Chimiro chekare-chitsva chehusungwa hwevanhu zvakare chikamu cheindasitiri yekushanya inobata vanhu vakuru uye inoshandisawo vana.
Vatengesi vanotora mukana weyakavanzika uye kusazivikanwa kunowanikwa kuburikidza neindasitiri yekugamuchira vaenzi nechinangwa chekubata chibharo.
Vezvekuchengetedzwa kwevashandi vezvekushanya vanofanirwa kuwedzera mukupa chengetedzo kubatawo nekutyisidzira kwehugandanga kunoitirwa nzvimbo dzekufambisa, zviitiko zvikuru, nechikafu uye pekugara parutivi rweindasitiri yekufambisa neyekushanya. Munyika yematenda, kuchengetedzwa kwekushanya kuri zvakare pamusoro pekuchengetedza avo vanoshandisa indasitiri uye vanoshanda mairi vakagwinya. Izvi zvinoreva kudiwa kwekudyidzana nevashandi vehutano hweveruzhinji uye kuyedza kwekugadzira kufamba kwakanaka uye ruzivo rwevashanyi uye kutsvaga nzira dzekutendera avo vanoshanda muindasitiri yekushanya kuti vagare vakagwinya.
Nehurombo, kune rumwe rutivi rwakasviba rwekushanya, umo vese vashanyi nevanhu veko vanotora chikamu, ndiko kuti indasitiri yekutengesa vanhu. Haasi ese ekutengesa kwevanhu anobata nezvekushanya. Zvimwe zvacho zvinoitirwa chipfambi chemuno, kutengeswa kwezvinodhaka zvisiri pamutemo uye kuitwa nhapwa kwevarume nevakadzi. Nehurombo, iyi yekare-nyowani fomu yehusungwa hwevanhu zvakare iri chikamu cheindasitiri yekushanya. Haisi chete iyi-yechinyakare fomu yekutengesa inobata vanhu vakuru zvinosuruvarisa kuti inoshandisawo vana.
Zvisinei nezvinodiwa nevanhu vazhinji kutenda, pane vanhu vanofamba nechinangwa chekuita zviito zvepabonde zvisiri pamutemo. Kune zvakare zvikamu zveindasitiri yekushanya uye yekufambisa iyo inoshandisa vanhu vakatengeswa sechiitiko chevashandi vane mutengo wakaderera. Kune zvikonzero zvakawanda zvechirwere ichi, kubva pakutenda kuti vanhu vari munyika dzakasimukira vanokosha zvishoma pane pfungwa yekuti chikara chemhuka chinotenda kuti mwana anogona kunge ari mhandara, pakutenda kuti vanhu ava havagoni kudzivirira ivo pachavo uye inogona kushandiswa kune chero nhamba iyo mutadzi anotenda kuve kugutsikana kwemunhu.
Kunyangwe chii chikonzero chakapihwa kururamisa mhosva, kubiwa kwevanhu uye kushandisa zvisiri pamutemo uye zvinoparadza mwana, kumunhu mukuru, uye nenzanga yese. Iko Kutengeserana Kwepabonde Kubata kweVana (CSEC) iko kutyora kwakakosha kwekodzero dzevanhu. Zvakadai sekubata chibharo kwave kuripo munhoroondo yese, asi zviri mumakumi emakore achangopfuura kuti chiyero chematsotsi aya chakaunzwa kuhurumende neveruzhinji.
Indasitiri yekugamuchira vaeni haigone kutiza dambudziko iri. Vatengesi vanotora mukana weyakavanzika uye kusazivikanwa kunowanikwa kuburikidza neindasitiri yekugamuchira vaenzi nechinangwa chekubata chibharo. Vasiri-gwaro vashandi vanogona kutya "kubatwa" uye nekudaro vazvibvumidze ivo kushandisa kunge sevashandi vevaranda pane kuti vadzokere kumusha kwavo. Indasitiri yekugara haisi chete nzvimbo yekubata vanhu pabonde uye kazhinji kumanikidzwa basa asi matambudziko aya anogona kuitikawo kumitambo yemitambo, mapaki emusoro, uye ngarava dzekufamba. Vazhinji vashandi vanogona kusaziva zviratidzo zvekubiwa kwevanhu kana kuziva kuti vavanoshanda navo vanogonawo kubatwa.
Kunyangwe vamwe vakapokana kuti kutya kweCOVID-19 kana huwandu hwezvirambidzo zvekufamba kwenyika zviripo izvozvi zvinogona kunge zvakadzikisa huwandu hwevakabatwa panguva yedenda, vamwe vakapokana kuti hurombo hwakawedzera hunokonzerwa nedenda iri hwawedzera kushandiswa kwevanhu. Muchokwadi, idzi dzinongova fungidziro kunyangwe kuvhurwa kwemuganho wekumaodzanyemba kweUS kunogona kukonzera kuwedzera kwekutengesa vanhu muNorth America yese.
Kune zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti utsanangure kuti nei kubiridzira kuripo uye kubatana kwaro nekushanya. Izvi zviito zvepabonde zvisiri pamutemo zvinogona kukonzerwa nekusazivikanwa semhedzisiro yekuve kure nemba yavo, kana nepfungwa yekuda kutonga mumwe murume kana mukadzi. Kukurumidza uye kwepasirese kukura kwekudhura-kwekufamba nendege kwaita kuti nendege dzive nyore kuwanika uye nzvimbo nyowani uye dziri kubuda, kana dzakavhurika, dzinogona kusvika nenhamba yepamusoro yevashanyi, kusanganisira vanogona kupara mhosva dzevana pabonde. Zvakare, kusagadzikana kwezvehupfumi kuri kukonzerwa nekuvharwa kwehurumende kwagadzira boka idzva revanhu vakadzvinyirirwa avo vanogona kuve varombo.
Zvekushanyirana pabonde uye kunyanya izvo zvinobata varombo uye vasina dziviriro igomarara remagariro rinon'un'una pamucheto chaiwo weindasitiri yekushanya neyekushanya. Nehurombo, hapana munhu anonyatsoziva kuti vangani vanhu pasi rese vari varikushungurudzwa kwakadai. International Labour Organisation (ILO) inofungidzira kuti huwandu hwevanotambudzwa hunogona kunge huri mumamirioni. Kutengeswa kwevanhu seindasitiri isiri pamutemo kunofungidzirwa kuti kunounza mabhiriyoni emadhora ekuAmerica zvachose uye zvinofungidzirwa kuti vangangoita 60% yekutengesa pasi rese ndeyekushungurudza vanhukadzi, uye vanodarika makumi maviri muzana yevakabatwa vari vana. Huwandu chaihwo hwevashandi vanobhadharwa mari shoma uye / kana vasina kubhadharwa (vasina kubhadharwa vashandi vevaranda) kutenderera pasirese hazvizivikanwe asi huwandu hwacho hunoratidzika kunge hunoshamisa.
Kuti utange kugadzirisa dambudziko iri, Tourism Tidbits inopa mazano anotevera.
-Usavanza dambudziko; kufumura. Nharaunda dzekushanya, kunyanya mumazuva ano echirwere, dzinofanirwa kushambadzira kuti vane zero-shiviriro mutemo. Mutemo uyu unoreva kuti vakuru vezvekushanya vanofanirwa kuburitsa ruzivo vachinyevera vashanyi kuti kushungurudzwa kwevakuru nevana hakuzobvumidzwe. Ruzivo urwu runofanirwa kuve kumahofisi enhandare, mumakamuri ehotera, uye kunzvimbo dzekushanya ruzivo. Ibasa remunhu wese anoshanda mukushanya kuti ashandise kugona kwake kushambadzira kutsvaga kurerutsa dambudziko iri.
-Ziva kuti dambudziko rinogona kunge riripo munharaunda menyu. Rimwe rematambudziko makuru neichi chirwere chakavanzika ndechekuti nzanga zhinji dzekushanya dzinenge dzisingazive kana kusarudza kusaona dambudziko. Kufuratira dambudziko rehukuru uku hakuiti kuti dambudziko rinyangarike asi zvinongowedzera kusimba kwedambudziko.
-Gadzira boka rebasa uye shanda pamwe nevamiriri vemitemo vemuno kuongorora nekuvandudza mazano. Pakati peiyi COVID-19 imbomira ino ndiyo nguva yekuvandudza nzira nyowani dzekumisa kubiridzirwa kwevanhu. Hapana mhinduro imwe inokwana zvese. Bvunza kana fomu iri rekushandisa riripo munharaunda menyu nekuda kwekushaikwa kwemabasa ekudzivirira kana mitemo? Urombo ndicho chinhu chikuru here? Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemutemo havana here kupa dambudziko iri kutarisirwa kwariri?
- Ziva kuti nzvimbo dzakasimukira dzenyika dzinowanzo kuve nzvimbo dzekutengesa vanhu. Vatariri vezvekushanya munzvimbo dzakaita seEurope, United States, Japan neIsrael vanofanirwa kuziviswa kuti zvikamu zvavo zvepasi pano zvinowanzove pamagumo ekutengeswa kwevanhu.
-Gadzira mhedzisiro kune avo vari kutora chikamu kutora mukana wevana. Panowanzove nevanhu vazhinji vanobatanidzwa mukushungurudzwa kwevanhu, pakati peavo ndeaya: mutengi, munhu "arikuroja" mwana, mukadzi, kana murume, mupi, saiye anotapa kana mubereki "anotengesa" mwana uye middlemen, senge mahotera vanobvumidza vamwe vanhu kuti vashandiswe panzvimbo yavo. Vese vatatu vanoda kumhan'arwa kumutemo zvakazara. Izvi zvinoreva kuti mahotera anofanirwa kuziviswa kuti kana vakaisa ziso kutarisiro yebonde kana yebasa vanobva vabhadhariswa faindi, vachiiswa mutirongo, kana hotera inosungirwa kuvharwa.
-Iva vanoziva kuti vana vanogona kushandiswa mune akawanda mafomati. Hakusi chete kwekushanya kwepabonde kunoshandisa vana kuti vagutsikane nekukasira pabonde, asi vana vanogona kushandiswa zvakare mukugadzira mafirimu ezvinonyadzisira anopedza mavhidhiyo. Izvi zvinoreva kuti mitemo mitsva inogona kudikanwa kuchengetedza vana kana mitemo iripo ingangoda kuteedzerwa zvakanyanya.
Shanda nenharaunda dzenzvimbo. Hondo yekurwisa kubatwa zvisina kufanira inzira iyo nharaunda yekushanya inogona kuratidza nharaunda kuti ine hanya. Shanda nemasangano emunharaunda, nemasangano ezvitendero uye chero rimwe boka rine hanya nedambudziko iri. Nekuratidza kuti vakuru vezvekushanya havana hanya chete nedambudziko iri, asi zvakare vakagadzirira kushanda kuti vazvigadzirise, indasitiri yekushanya yemuno yaenda nzira yakareba yekukunda moyo nepfungwa dzevagari vemunharaunda nevafambi zvakafanana.
-Shandisa mazwi anomanikidza vanhu kuti vazive kuti zviri kuitwa zvakaipa. Gara kure nekutuka. Tourism inoshandisa zvakawandisa zvirevo. Kana zvasvika kune zvekusangana pabonde uye zvevashandi zvine simba iro izwi iri nani. Semuenzaniso, pane kuti "zvinonyadzisira zvevana" zvinodaidze kuti "zvinhu zvekuona kushungurudzwa kwevana." Ita kuti mazwi asimbe sezvinobvira senzira yekunyadzisa vanhu.
-Usatya kushambadza mazita evanhu vari kutengesa kana kutenga vamwe vanhu. Itai kuti nyika izive kuti vanhu ava vari kutengesa kana kutenga varume, vakadzi nevana kana kubvumidza kushandiswa kwezvinhu zvisiri pamutemo uye zvisina hunhu panzvimbo yavo. Chinhu chakakosha ndechekuti kushanya kunofanirwa kuve simba guru kune zvakanaka uye kuratidza pasi rose kuti indasitiri yekushanya ine hanya.